← Dhugaa-Baatu Ta’u
Ilmicha Qabdaa? →
2 Qorontos 4:1-6
Waan gaarii yeroo nuuf ta’u, waan nuti itti yaadnee itti dhamane tokko yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti simana laata? Waan namni biraan itti yaadee, itti dhama’e tokko yeroo guutuuf baatu immo attamitti dhiima sana hubanaa? Madii gaaruumma hunduma Waaqayyo. Isaa iraa waan gaariin hundinu nuuf akka ta’u sagaleen Waaqayyo nuu barsiisa.
MAREE : Waaqayyon amanachuu, qabana jireenya, fi abdii qabachuun kee kenna Waaqayyo ta’u isa ni hubataa? Namooni kaan immo Waaqayyo amanachuu utuu feedhan, akka hin dandeenye siif gala?
MEE ITTI YAADII: Nama karaan jireenya jala bade tokko yeroo argitu, Waaqayyo akka ija qalbii isaa isaf banu ni kadhataf?
SEENSA: Namni abban feedhe iyyu humna yookiin hubanna mata isaan of fayyisu, gara Waaqayyo dhufu ykn jireenya Waaqayyo waliin filachu hin danda’u. Dubbin fayyina ykn nama Waaqayyo ta’u yoo Waaqayyo ifa isaa namaf ibse duwwa danda’ama. Kanafu wiirtun dhimma kana Waaqayyo malee nu miti. Mee 2 Qorontos 4:1-6tti dubbisi.
1. Madii fi hundeen fayyina keenya eessa? Eenyu? Attamitti fayyina argachuu dandeenye?
2. Fayyun keenya waa’ee keenya hima immo waan biraa dhugaa ba’a?
3. Warri ifa Waaqayyo arguu dadhaban maaliif arguu dhaban?
4. Waaqayyo maaliif ifa isaa sii fi anatti mul’isee jette hubataa?
5. Wiirtun dubbi eenyudha jedha, Phaawulos? Kanafu nuti maal gochuu qabna ree – Hojji Waaqayyo illalchise? Wali-wali keenya illalchise?
6. Jireenyi fi tajajilli keenya kanafu attam ta’u qaba?
7. Wiirtun dubbi kana Waaqayyo ta’un isaa birmadumaa nuuf kenna jette ni yaadaa? Maaliif? Birmadumaa attami nuuf kenna ykn dhowwata?
Goofta Yesus isa ifa isaa siif kennef galata fi ulifina kenni. Akka inni hubanaa, humnaa fi oo’inaa ittin ifa isaa kana namoota biraan ittin gesuu siif kennuuf kadhadhu.
“Nuyi ofii keenya utuu hin ta’in “Yesus Kristos gooftaa dha” jennee in lallabna; nuyi immoo sababii Yesusiif hojjetoota keessan” 2 Qor. 4:5. Akka sagalee kanatti jirachuun salpha miti. Mee Waaqayyo akka dubbi kana siif ibsuu fi humna itti dubbicha jiratuu akka siif kennuf irratti xinxalii humna isaa gaafadhuu.
Namni cubuu irra kan ka’e, Waaqayyon achii dhiibe ofi isaa wiirtu, ijoo ykn dhiima issa hunduma irra jaba godhe of dhabu feedha. Kana irra kan ka’e, fayyina, fixan ba’u, qaabana, booqonna, nagaa, kkf isa Waaqayyo ayyana fi jaalalla isaan issaf kenne hirranfate dubbi waa’ee nama sana waan ta’e fakkesuuf dhama’a. Kanaf namni Gooftumma Kristos lallabuu irra, yoo base hin jedhu iyyu ta’e, gooftumma mata isaa, caalma isaa, bekkumsa isaa, dandeetti isaa, kkf utuu lallabu argama. Kun soba namni jedhu, faggo utuu hin deemin nanno isaa, waldaa isaa, … haa ilallu.
Kutta asi olitti qara’ane, wiirtun waan gaarii hunduma nama utuu hin tane Waaqayyo isaa “Dukkana keessaa ifni haa ifu” jedhe ta’u isaa nu barsiisa. Waaqayyotu garaa keenya isaa dukkana’a, isaa xura’aa, isaa humninan guutu, “keessaa ifni haa ifu” jedhe nuuf ibse. Kun hojji Waaqayyo ti male waan dhama’i keenyan argame miti. Kanafu warri gaaruuma Waaqayyo akka labsinu aadara nuti kenname, ”ofii keenya utuu hin ta’in “Yesus Kristos gooftaa dha” jennee in lallabna; nuyi immoo sababii Yesusiif hojjetoota keessan.” Kristos Goofta dha, warri labsi kana fidan immo waa’ee isaaf hojjetoota yookiin garboota. Tesso irra kan ta’u malu Goofticha. Warri labsan immo garboota mila tessicha jala ta’ani dha.
Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti — 3 Comments
adisu m on November 30, 2016 at 6:28 am said:
waaqkennee on February 11, 2016 at 5:39 am said:
erga keesaniif waaqayyoo isin haa eebisuu
Alemayehu Tolera on August 21, 2015 at 9:42 am said:
Waaqayyo Ogummaa isaa fi Ayyaana isaa isiniif haa baay’isu dubbii waaqayyoo hedduu nu barsiise jabaadhaa!